मोदीले यसरी नेपालसँगको मित्रतालाई व्याख्या गरेका छन् । नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो । भारतले नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाडिरहेको छ । भारत ऊर्जाको भोको रहेको छ । उसलाई नेपालबाट जलस्रोतको दोहन गर्नुछ । यस्ता नानाथरी समाचार शीर्षकमा राजनीति गर्नेहरू र आफ्ना खेतीपाती चलाउनेहरूको कमी रहेको छैन । यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएका भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रस्ट पारे । हामीले तपाईको बिजुली सित्तैमा लिन खोजेका छैनौं । त्यसको उचित मोल तिर्छौं । भारतलाई नेपालको बिजुली निकालेर आफ्नो गर्जो टार्नु भन्दा पनि उपाय गर्नु राम्रो हुँदाहुँदै नेपालको जलविद्युत मित्रतालाई बढावा दिन खोजेको विषय ती खेलाडीहरूलाई थाहा छैन । नेपालले आफ्नो बिजुली निकालेर विजुली बेच्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । बिजुलीको खरिदार नभए टाढा बेच्नु पर्ने भो भने त्यसको लागत बढने र खरिदकर्ता कम हुने आधुनिक आर्थिक सिद्धान्तको फेरिहस्त बुझेका विद्वानहरूले पनि भारतले नेपालको जलविद्युतमा आँखा गाडेको विचार फैलाउन सक्रिय रहेकै छन् । त्यस्तालाई मोदीको जवाफ प्रस्ट भएको छ । तपाईका बिजुली सित्तैमा लिने छैनौं । तपाईका बिजुलीको मूल्य तिछौं । तपाईहरूले आफ्नो बिजुलीको मोल लगाउनुस हामी किन्न तयार छौं । यस्तो भनिरहँदा नेपालीहरूलाई विश्वास भयो । र ती राजनीतिका खेतीपाती गर्नेहरूले फैलाएका भ्रम चिरियो ।
यता, भारतका प्रधानमन्त्रीको करिब सात दशकपछि नेपालको मधेश भ्रमण हुँदैछ । यसअघि १९५० मा कोशी ब्यारेज सप्तरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू आएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गर्न लागेको यो भ्रमणबाट मधेशका आठ जिल्लासहित समग्र मधेशवासी उत्साहित देखिएका छन् । प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य तथा स्वच्छता अभियानी राम आशिष यादवले यो भ्रमण एउटा धार्मिक भएपनि यसले सामाजिक, आर्थिक र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने बताए ।
मोदी नेपाल भ्रमणको क्रममा सबभन्दा पहिला जनकपुरधामबाटै प्रवेश गरेका छन् । भारतको पटनाबाट नेपालको जनकपुरधाममा सिधा प्रवेश गर्नु मधेश र खासगरी जनकपुरधामका लागि बडो महत्वपूर्ण मानिएको छ । उनको यो भ्रमणले जनकपुरधाममा वर्षौंदेखि हुन नसकेको चमत्कार भएको विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरू हुँदैछन् । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र नेता कार्यकर्ताहरू झाडु लिएर सडकमा उत्रेको दृष्यहरू हेर्न पाइयो । तर, त्यो तदारूकता देखावटी मात्र हो कि वास्तवमै जनकपुरधामलाई स्वच्छ बनाउने त्यो त पछि हेर्न नै बाँकी छ । यद्यपि, मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणले ऐतिहासिक धार्मिक आस्थाको रूपमा रहेको जानकी मन्दिर विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने आशा पनि गरिएको छ । जनकपुरधाममा पर्यटनको सम्भावना पनि बढ्दै गएको बुझिन्छ । प्रदेश २ को राजधानीको रूपमा रहेको जनकपुरधामले यस भ्रमणपछि विकासमा फड्को मार्ने निश्चितझैं भएको छ । यसैबीच रंगभूमि मैदान बाह्रबिघामा आयोजित नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा मोदीले जनकपुर आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि एक अर्ब दिने घोषणासमेत गरे । योसँगै अब जनकपुरधामको मुहार फेरिने आशा गरौं । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
← माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुन्दनप्रसाद कुशवाहको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी
प्रदेश नम्बर २ : नाम र राजधानी कहिले ? →
कांग्रेस मिल्ने कि सकिने !
“शत्रु” विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालको एक लेख…..!!
सुशील कोइरालाबाट नेतृत्वले सिक्नुपर्ने कुरा
२८ माघ २०७४, आईतवार गोक्यो संवाददाता 0